Inkwenkwezi yeenkwenkwezi Inkcazo yeDarth Maul
UDarth Maul wayengumfundi we-Sith waseDarth Sidious. Ukubonakala kwakhe okwesabisayo kunye nezakhono kunye ne-lightsaber zaye zaxwayisa i-Jedi ukuba uSith ubuyile - kunye nokungaziphathi kakuhle iinzame zabo zokufumana nokutshabalalisa lonke iSith .
Ngaphambi kweeNkqubela zeNkwenkwezi zokuQala
IDarth Maul yayinguZabrak, inxalenye yohlanga lwangaphandle lwama-humanoid kunye neempondo zaso. Umbala wakhe wesikhumba wobomvu wawubomvu; Kamva wafumana amathambo amnyama eSith phezu komzimba wakhe wonke, wongezelela ekubonakaleni kwakhe.
UDarth Sidious waqala ukuhlangabezana nentsha yaseDarth Maul kwiplanethi yakhe yasekhaya yaseDathomir waza wamthabatha kwintsapho yakhe ukuba aqeqeshe ngasese. Ubukhohlakali bobugwenxa bumba uMaul kwisixhobo sokuthiya inzondo - isikhali sebala elimnyama loMkhosi .
Ngokomthetho weBibini, owasekwa nguSith Lord Darth Bane, uvavanyo lokugqibela lwesifundo se-Sith ukubulala inkosi yakhe. UMaul wayejongene nalo vavanyo emva kokuba uqeqesho lwakhe luphelile, kodwa iinzame zakhe zokubulala abaSidiya aziphumelelanga. Noko ke, abantu abanomdla, bavakalisa ukuba ukuvavanya kukufuna ukubulala inkosi, kwaye ngoko iDarth Maul idlule.
Isiqendu I: I-Phantom Menace
UDarth Maul wadlala indima ebalulekileyo kwiDarth Sidious 'icebo lokuthatha iSeneti. I-Maul yayiseNaboo ngexesha lokuhlasela kwe-Trade Federation kwaye ilandele uNdlovukazi u-Amidala kunye neJedi ukuya eTatooine. Wabuyisela i- Qui-Gon Jin apho, kodwa i-Jedi Master yaphumelela.
UMaul wahlangana noQii-Gon kunye no-Obi-Wan wakhe ootitshala ngexesha leMfazwe yaseNaboo.
Nangona watsho u-Qui-Gon, wambulala, u-Obi-Wan Kenobi wabuyisela inkosi yakhe, wambamba iDarth Maul emibini.
I-Darth Maul njenge-Misdirection
Ngeli xesha leNgqungquthela I: I-Phantom Menace , i- Jedi yayinandipha inkulungwane yempumelelo emva kokutshatyalaliswa kweSith. Iqonga likaQui-Gon kunye neDarth Maul kwiTatooine yinkcazo yabo yokuqala yokuba uSith usenokuba khona.
I-Maul ngumdlali onamandla kakhulu; Usebenzisa i-lightaber ene-blaw fire blade kwaye ulawula ukubulala i-Jedi Master. Kodwa iBhunga leJedi liyazi ukuba elinye i-talented Sith Lord-Darth Maul okanye inkosikazi okanye i-apprentice - kufuneka isaphila.
Ukubonakala kunye nezenzo zikaDarth Maul, nangona kunjalo, yinto ephawulekayo yokuchithwa kakubi yiDarth Sidious (aka ke-uSeninari Palpatine). I-Maul ithe cwaka (imida yakhe emithathu kuphela kwisiqendu ndithetha ku-Sidious, ayikaze kumchasene naye), kunye namathambo akhe amnceda amnike ukubonakala okwesabisayo, okuhlambulukileyo. I-Maul yiyo iJedi efuna ngayo xa becinga ngeSith; abazange babecinge ukuba bakrokre ulopolitiki othe ngqo.
I-Darth Maul ibonakaliswe ngumculi kunye nomculi waseRay Park kwi -Phantom Menace , eneemigca ebhalwe nguPeter Serafinowicz. Ukubonakala kwakhe kwenzelwe ngumculi wengqiqo u-Iain McCaig, eneempawu eziphefumlelwe nguPaulich kunye ne-Rorschach iiblothi zeenki.
Ilifa leSwalkwalker Family Tree
UDean Corll kunye nabaMbulali baseMouston
I-Konrad Zuse kunye neNtshutshiso ye-Modern Computer
Iingoma zeBlues Ukubukela ngo-2010
Indlela Yokuba Nomonde
Indlela yokusebenzisa iisenzi zesiFrentshi ngeZibonelelo
Ingxelo yoVavanyo, uMqulu ochonga uMfundi oPhethekileyo we-Ed